Soo-Celiyaha Dahabka Mareykanka: Kani ma Goldie kuu fiican? - Taranka
Soo-Celiyaha Dahabka Mareykanka: Kani ma Goldie kuu fiican?
Soo-celinta Dahabka badanaa uma baahna isbarasho gaar ah. Waxay ka mid yihiin noocyada eyda ugu caansan - kaliya ma ahan Mareykanka, laakiin adduunka!
Waa xayawaan gurijoog ah oo wanaagsan oo ka taga raadadka tamarta wanaagsan meel kasta oo ay tagaan.
La kulan ka-fariistaha dahabiga ah ee Mareykanka
Laakiin ma ogtahay inay jiraan saddex nooc oo Goldies ah? Waan ’’ xusaynaa dhammaantood, laakiin aan diirada saarno waxa ka dhigaya Ceyriska Dahabka ah ee Mareykanka inuu istaago.
Waa maxay Casriye Dahab ah oo Mareykan ah?
Sidee ayuu u eg yahay Ciyaaraha Dahabka ah ee Mareykanku?
Dabeecadda: Hawlgabka Dahabka ah ee Mareykanku sida xayawaan ahaan
Daryeelka Caafimaad-dhimista Dahabka ah ee Mareykanka
Soo helitaanka Ey yaryar oo ah Dhakhaatiirta Caanka ah ee Dahabka ah ee iibka ah
Noocyada Noocyadu waxay u egyihiin Mareykanka iyo Ingiriisiga Dahabka Dahabka ah
Miyaad heshaa Hawl-gabe Dahab ah oo Mareykan ah?
The Golden Retriever American waa mid ka mid ah kala duwanaanshaha noocyadan, laakiin waxay la mid yihiin Goldie kasta oo saafi ah .
Aynu wax yar ka wada hadalno asalka eygan. Waxaad raad raaci kartaa taariikhda Soo Celinta Dahabiga ah dib ugu noqoshada bartamihii qarnigii 19-aad Scotland halkaas oo looga adeegsan jiray ugaarsiga iyo soo-celinta shimbiraha biyaha.
Noocan ugaarsiga xirfad leh wuxuu aakhirkii u kicitimay Waqooyiga Ameerika iyo qaaradaha kale, isagoo sii waday kor u kaca caannimadiisa. Maanta, iyagu waa nooca saddexaad ee ugu caansan Mareykanka waxayna ku jiraan kaalinta 8aad ee Boqortooyada Midowday.
Dadku waxay ku caabudeen Goldens caqligooda iyo qaab macaan , taasoo ka dhigtay inay ku fiicnaadaan shaqooyinka kale ee goobta sida ogaanshaha, goobidda iyo samatabbixinta, iyo eeyaha caawinta naafada.
Noocyada: Ingiriisiga Hawl-gabka Dahabka ah VS. Hawlgab Dahab ah oo Mareykan ah
La kulan Billadaha Dahabka Cad
Goldens waxaa markii ugu horeysay aqoonsaday Naadiga Kennel ee Ingiriiska (KC) sanadkii 1913 iyo Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC) sanadkii 1932. Heerarka Taranka ee naadi kasta waxay u xuubsiibteen inay la jaan qaadaan dookha milkiilayaasha eyda ee gobolada ay ka kala yimaadeen ama dalkooda.
Noocyada ugu caansan ee Dahab-doonka Dahabka ah marka loo barbar dhigo Goldens-ka Mareykanka waa Goldies ee Yurub, sidoo kale loo yaqaan Ingiriis Kareemka Dahabka ah ee Ingiriiska .
Sida ku xusan United Kennel Club (UKC) heerka caanaha loogu talagalay Ingiriis Goldens, waxay leeyihiin timo gaaban oo ka sii waaraya taas la imow hooska kareemka , Halka qaar kood moodo inay leeyihiin jaakad cad oo leh xarig dahab ah.
Waxay leeyihiin madax iyo dhegaha sida sanduuqa u eg oo ka ballaaran oo dhex dhexaad ah.
Marka laga hadlayo habdhaqanka, noocyada kala duwan ee Ingiriisiga ayaa lagu yaqaan inay yihiin deggan oo hab fudud loo tababaro .
Caafimaadka, inkasta oo labada nooc ee 'Golden Retrievers' ay ku dhacaan cudurro isku mid ah, Ingiriis Goldens wuxuu ku raaxeysan karaa inta badan cimrigooda, oo ah 12 sano.
Waxaan dooneynaa inaan cadeyno in iyadoo aan loo eegin meesha lagu soo barbaaray, naadiyada gogosha ayaa dhamaantood loogu yeeraa 'Soo Celinta Dahabiga ah.'
American Goldens sidoo kale waxay leeyihiin dhakad ballaadhan oo qaanso leh oo waji yar oo qoto dheer leh. Waxay leeyihiin dhago gaagaaban iyo cirifyo si dhow isugu xidhan, oo leh indho nafeed oo dhexdhexaad ilaa waaweyn leh. Dhinaca kale ee jirkoodana waa dabo xoogaa qalooca.
The Heerka nooc ee AKC midabkooda jaakad wuxuu ku qeexayaa 'taajir dahab dhalaalaya oo midabbo kala duwan leh.' Goldie kasta oo leh dhogor aad u fudud ama mugdi ah waxaa loo tixgeliyaa qalad ama lama aqoonsan .
Noocyada oo dhami waxay leeyihiin a jaakad jilicsan iyo jubbadda cufan ee u adkaysta biyaha . Marka loo eego noocyada kale, waxay leeyihiin baal toosan iyo jaakad ka sii dhumuc weyn.
Meelaha qaarkood ee jirkooda, sida qoorta, bowdyaha, iyo dabo, leeyihiin baalal ka culus laakiin aan si xad dhaaf ah u dheereyn . Haddii aad qorsheyneyso inaad ku biirto bandhigyada eyga, muuqaalka dabiiciga ah had iyo jeer waa habka ugu fiican ee loo maro.
Intee ayey le'eg yihiin Soo-celinta Dahabka Mareykanka ah?
Hawlgabka Dahabka ah ee Mareykanku wuxuu taagan yahay meel kasta oo uu ka yimaado 21.5 ilaa 24 inji (55 illaa 61 cm) oo dherer ah oo miisaankeedu u dhexeeyo 55 iyo 75 rodol (25 ilaa 34 kg). Dumarku marwalba way kayaryihiin ragga.
In kasta oo ay caqli leeyihiin oo aad loo tababaran karo, Soo-celinta Dahabka ah ayaa loo xagliyay inay ku socdaan.
Xitaa haddii ay ku noolaan karaan guryo iska caadi, waxaan kugula talineynaa guri leh amni ammaan, oo waasac ah halkaas oo ay ku ordi karaan kuna ciyaari karaan markay doonaan.
Dhamaan Soo Celinta Dahabiga ah waa saaxiibtinimo, daacadnimo, caqli badan, iyo si wanaagsan ula dhaqan carruurta . Hal dabeecad oo ka dhigi doonta kala duwanaanshaha Mareykanka inuu istaago waa heerkooda tamar. Waxay yihiin kubad weyn oo madadaalo ah oo firfircoon oo jimicsi leh.
Isku dar intaas oo dhan dareenkooda ugaarsiga adag, waadna helaysaa eey aan daalin .
Maaddaama ay jecel yihiin ka mid noqoshada waxqabadyada maalinlaha ah ee qoyska, ma wanaagsana in laga tago qoob-ka-ciyaarkan saaxiibtinimada leh muddo dheer maxaa yeelay iyaga waxay u muuqataa inay yeelato walaac kala tag .
Haddii ay niyad jabaan oo ay caajisaan, filo xayawaan rabaayadeed oo dhex mara niyadda niyadjabka, oo halaag ku dhaco.
Marabtaa inaad aragto waxa u eg lahaanshaha Goldie Mareykan ah? Fiiri fiidiyowgaan qosolka badan:
Ma dib-u-helayaasha Dahabka ah ee Mareykanka wax badan ma ciyey?
Noocani waa guud ahaan aamusnaan oo mararka qaarkood ciyi doonta . Laakiin haddii aad aragto Dhaxalkaaga Dahabka ah ee qeylinaya, qeylada, ama calalinta alaabta guriga, kuwani waxay noqon karaan calaamado walaac kala soocid ah.
Waxay u badan tahay inay fiican tahay in fido-kani uu ku nool yahay guri ay ku leeyihiin wehel wehel, ama xayawaan kale si ay ula joogaan. Haysashada saaxiibka dhogorta leh ee lagu ciyaaro ayaa sidoo kale kaa caawin kara la macaamilka tamartaada Goldie.
Waxaan u tixgelin karnaa Soo-celinta Dahabka inay noqdaan dayactir hooseeya maadaama ay kaliya u baahan yihiin cadayasho marmar ah.
Qaarkood waxay yiraahdaan inay yihiin nooc dayactir sare ah cabirkooda iyo xaddiga timaha ay leeyihiin, waxayna u daadiyeen si mug leh. Laakiin maxay yihiin baahiyaheeda daryeel?
Xiirashada Maaliyad Dahab ah oo Mareykan ah miyey ka caawineysaa daadinta?
Maya, maya, sidaa darteed HA SHAXIN Hawl-gabkaaga Dahabka ah. Nooc kasta oo lab-dhajiye ah waa inaan la xiiran haddii aysan ahayn meesha ugu dambeysa ee caafimaad ama xaalad xun oo timo mooyee.
Taasi jaakad qaro weyn ayaa ka caawisa inay jaangooyaan heerkulka jirkooda waxayna ka ilaaliyaan maqaarkooda xaaladaha cimilada ee kala duwan .
Adoo xiiraya timahooda quruxda badan, waxaad burburinaysaa daboolkooda dabiiciga ah waxaadna sababi doontaa waxyeelo, kaliya ma ahan dhogorta laakiin sidoo kale maqaarkooda iyo caafimaadkooda.
Waxyeello soo gaarto xididdada timaha ayaa sidoo kale macnaheedu noqon karaa in jaakadoodu aysan weligeed dib u soo kori karin.
Lahaanshaha Hawl-gabka Dahabka ah macnaheedu waa inaad ka warqabto waqtiga iyo dareenka ay u baahan doonaan . Ku daryeelo jaakada eyga adoo adeegsanaya cadayasho maalin walba , iyo isqurxin xirfadeed, u kaxee ninka hagaajiya labadii biloodba mar.
Isku diyaari burushyada ugu fiican ee loogu talagalay Soo Celinta Dahabiga ah, sida shirkad burush burush , si Shanlada Greyhound , iyo a de-daadinta rake .
Immisa jimicsi ayey u baahanyihiin Soo-ceshayaasha Dahabka Mareykanka?
Soo Celinta Dahabka ah ee Mareykanka waa wax uun laakiin waa caajis, sidaas darteed saacad ama laba jimicsi maalinle ah ayaa kugu filnaan doona .
Waxaa jirta oraah oranaysa 'eey daalan waa eey faraxsan,' laakiin waa inaadan ka badbadinin eeyahaaga si looga fogaado in cadaadis lagu saaro lafahooda iyo kala-goysyadooda oo aan weli si buuxda loo horumarin.
Haddii aad sidaa sameysid waxay kuu horseedi kartaa dhibaatooyin xagga socodka ah, hadhowna, dysplasia sinta.
Marka laga reebo jimicsiga, waqtiga ciyaarta, iyo tababarka, waxaad siisaa nashaadaad maskax ahaan kicinaya eeygaaga. Waxay noqon kartaa mid fudud sida a xujo ama a tooy - wax kasta oo ka dhigaya inay ka fikirto.
Cunto lagu taliyay Goldie Mareykan ah
Soo Celinta Dahabka Mareykanka waa miisaan culus-xasaasi ah , sidaa darteed marka laga reebo ku dhajinta jadwalka quudinta, hubi in nooca cuntada iyo xaddiga cuntada eeyga aad siiso xayawaankaaga ay ku saleysan tahay heerka waxqabadkeeda, da'da, iyo cabirka.
Goldies-ka buuxa ayaa u baahan inay wax cunaan qiyaastii 2 ilaa 3.5 koob oo cunto ah maalintii . Iska ilaali cuntooyinka kalooriga ku badan maxaa yeelay waxay ka dhigi karaan Goldens inay si dhakhso leh u koraan, taas oo aan u fiicnayn horumarinta lafahooda.
Si lagaaga caawiyo inaad dooratid nooca ugu fiican eeyga eeyahaaga 'Golden Retriever', waxaan leenahay maqaalka taas ayaa ku caawin karta.
Muddo intee le'eg ayay soo nooleyaasha Dahabka ah ee Mareykanku nool yihiin?
Goldies-ka Mareykanka ayaa leh cimri yar oo gaaban marka loo eego Ingriiska Kareemka Dahabka ah ee Ingiriiska. Celceliska nolosha ee Dahabka Mareykanku waa 10 sano iyo 8 bilood, halka dhiggeeda Ingiriiska uu inta badan noolaado illaa 12 sano iyo 3 bilood.
Waxaa jira daraasad ay samaysay Naadiga 'Golden Retriever Club of America' 1998. Waxay ogaadeen in kudhowaad 60% dadka soo ceshada Dahabka Mareykanka ay u dhintaan kansarka marka loo eego kaliya 39% ee Soo Celinta Dahabka ee Ingriiska.
Marka laga reebo kansarka oo aan loo eegin nooca, American Goldens waxay wadaagaan dhibaatooyinka caafimaad, sida sinta iyo xusulka dysplasia, Gastric Dilation-Volvulus, iyo sidoo kale dhibaatooyinka indhaha iyo tayroodhka.
Ey Yar oo Mareykan ah oo ka Faa'iidaysi waxay ku kici kartaa meel kasta oo ka mid ah $ 500 illaa $ 2500 , iyadoo kuxiran goobta uu ku noolyahay, caan bixiyaha digaaga, iyo khadadka dhiiga waalidka.
Bixiye wanaagsan ma ka labalabeyn doono inuu ku tuso caddeynno caafimaad iyo dukumiinti kasta oo kaa caawin doona inaad ku barato ardaygaaga iman kara.
Sidoo kale cidna kama iibin doonaan. Kalkaaliyeyaasha mas'uulka ka ah ee daryeela eeyadooda ayaa hubin doona in iibsaduhu uu yahay midka saxda ah ee ubadkooda.
Dhiirrigaliyayaasha dahabiga ah ee Mareykanka
Way fududahay in laga helo shabakadaha internetka ee loo yaqaan 'purebreds' marka loo eego eeyaha naqshadeeya, taas oo ah wax fiican, gaar ahaan tan iyo markii uu 'Golden Retriever' ka diiwaan gashan yahay ururada sharciga ah.
Waa kuwan websaydhada qaarkood haddii aad dareento inaad diyaar u tahay Hawlgab Dahab ah oo Mareykan ah oo adiga kuu gaar ah:
Soo Celinta Dahabka Meadows (Moorpark, CA)
Waqooyiga Xiddigaha Soo Celinta Dahabiga ah (Logan, UT)
Meelaha SunGolden (Longview, CT)
Samatabbixinta Dhaxliyeyaasha Dahabka ah ee Mareykanka
Kaliya korsigu ma aha ikhtiyaar ka raqiisan inaad ku hesho nooc kasta oo eey ama xayawaan aad rabto ah, laakiin sidoo kale waa habka ugu wanaagsan ee lagu siin karo foosha fursad kale oo jacayl iyo guri.
Haddii aad diyaar u tahay inaad u furto qalbigaaga hawlgab Dahab ah oo da 'weyn ah ama xitaa qaar ka mid ah iskudhafkeeda, hubi goobahan samatabbixinta:
Soo Celinta Dahabiga ah ee Samatabbixinta Baahida leh (Cleveland, OH)
Samatabbixinta Dahabka ah ee Badbaadinta Badhtamaha-Florida (Goldenrod, FL)
Goldens Without Border (Las Vegas, NV)
Yankee Golden Resriever Rescue, Inc. (Hudson, MA)
Samatabbixinta Dahabka ah ee Wisconsin (West Allis, WI)
Ma isweydiineysaa waxa kale ee ay leeyihiin noocyada kale ee Retriever? Malaha eey u eg Goldies?
Meelahaani waxay la mid yihiin American Retrievers Golden iyo noocyada kale ee Goldens, laakiin waxay leeyihiin wax iyaga u gaar ah oo iyaga ku saabsan, sidoo kale.
Nova Scotia Duck Tolling Soo Celinta
Ciyaaryahan Mareykan ah oo Ciyaaraha ka fariistay
American Goldens ayaa sameeya xayawaan guriyeed aad u fiican haddii lagu rakibo reerka saxda ah.
Waxay u baahan yihiin milkiile la socon kara kooda dabeecad firfircoon oo ciyaar leh , iyo qof aan ka tagi doonin muddo dheer kaligood.
Haddii aad leedahay carruur yaryar, Soo-celinta Dahabka ah waxay u dhaqmi doontaa sida walaalo waayeel ah oo feejigan , markaa taasi waa inay wax kuu sheegtaa.
Sidoo kale waa inaad diyaar u noqotaa inaad wax ka qabato kuwan daadiyayaal caan ah . Lahaanshaha santuuqan ma noqon karo mid sidaas u adag, laakiin qashin kasta oo leh cabbirkan ma noqon karo wax fudud in la daryeelo.
Miyaad naftaada u maleyn kartaa inaad heleyso Hawlgab Dahab ah oo Mareykan ah? La wadaag fikradahaaga qaybta faallooyinka ee hoose.
Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Shepher'ka Sharafta Leh
Isku-darka Beagle Lab: 15 Xaqiiqo oo aan ka jecelnahay Beagador-ka dhalaalaya
yeey dumar ah magacyada iyo macnaha
Jarmal Shepherd rottweiler isku dhafka cabbirka
Shaybaadhka jaalaha ah iyo isku dhafka godka
Siberian husky magacyada iyo macnaha